ब्याटमिन्टन खेलाडीको प्रेममा तपसी ! - Dainik Nepal
ब्याटमिन्टन खेलाडीको प्रेममा तपसी !
दैनिक नेपाल २०७५ साउन २५ गते १४:०४
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तपसी पन्नू बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छिन् । अभिनयमार्फत उनले सबैको मन जितिसकेकी छन् । पछिल्लो समय तपसीले अभिनयको जादू ऋषि कपूरसँग फिल्म ‘मुल्क’मा देखाइन् । यसका साथै तपसीको फिल्म ‘मनमर्जिया‌ं’को ट्रेलर रिलिज भइसकेको छ । उनै तपसी यतिबेला आफ्नो रिलेशनसिपलाई लिएर मिडियामा छाएकी छन् ।
ब्याटमिन्टन खेलाडी म्याथियससँग उनी नजिएकी छन् । पछिल्लो चार वर्षदेखि उनी म्याथियसको प्रेममा छिन् । दुवै सम्बन्धलाई लिएर सिरियस छन् । हालै तपसी ब्वाइफ्रेन्डसँग मुम्बईको एक रेष्टुरेन्टबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भेटिइन् ।
उनले केही समयअघि दिएको एक अन्तर्वार्तामा आफूले व्यक्तिगत जीवनका कुराहरु त्यति भन्न नरुचाउने बताएकी थिइन् । म्याथिअसको परिवारले समेत तपसीलाई मन पराइसकेका छन् । परिवारले उनीहरुको चाँडै नै सँगै भएको देख्न चाहेपनि दुवै यतिबेला आफ्नो करियरमा केन्द्रीत देखिएका छन् । -एजेन्सी